China Cavitation RF Multifunctional Cryolipolysis Slimming Machine ụlọ ọrụ na ndị na -eweta ya Nubway
Ekwentị: +86 18310833916
Slimming na Shaping usoro
Cryolipolysis slimming igwe cryotec 360
Cryolipolysis slimming machine ice na -akpụzi IV PRO
Igwe na-agbada Cryolipolysis NBW-C5
infrared RF vacuum VSⅢ slimming igwe
Igwe eji eme Slimming HIFU
Usoro mwepụ ntutu
Igwe mwepụ ntutu Diode Laser
Igwe ọkụ ọkụ IPL SHR
Mwepụ egbugbu laser na usoro mwepụ ụcha
igwe laser picosecond
Q igwe na -agbanwere Nd Yag laser
Igwe eji eme mmiri Hydro Dermabrasion Protable
Usoro ịka nká
Fractional RF Micro agịga igwe
Fractional RF Micro agịga igwe NBW-FR200
Mpekere mkpirisi RF Micro agịga igwe
Mpekere CO2 igwe laser
Lekwasịrị anya RF Skin tightening Machine
Igwe eji emegharị akpụkpọ anụ 3D HIFU
Usoro Ọgwụgwọ Ududo Ududo
Igwe Mwepụ Ududo Ududo Ududo Ukwuu
Igwe na -eme mkpọtụ na -akụda mmụọ
igwe jụrụ igwe
Igwe igwe na-agbada ọtụtụ-cryolipolysis
Igwe na -ewu Muscle Emsculpting
New Design 4 na -ejikwa EMS Ngwa Emsculpting Ele ...
Mwepu ogologo mkpirisi 3 Diode Laser iwepụ ntutu ...
Nubway Kacha ọhụrụ imewe 1-10Hz mgbanwe q-mgba ọkụ ...
Ihu mkpagharị na anya na -ebuli ndọlị ...
Cavitation RF Multifunctional Cryolipolysis Slimming Machine
Usoro cryolipolysis na -enye nchekwa jụrụ nke ọma ka ejiri nwayọ gbado anya na abụba abụba dị n'okpuru
akpụkpọ ahụ. A na -eme ka mkpụrụ ndụ abụba na -agwọ ọrịa dị ike (oyi kpọnwụrụ), wee nwụọ. Ka oge na -aga, ahụ gị na -ahazi abụba ma wepụ ihe ndị a
mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ, na -ahapụ gị ihe ọkpụkpụ.
Theory arụ ọrụ:
Site na isi mkpali ụda dị ike, enwere ike ibunye ahụ mmadụ ike maka 40Khz maka imetụta mkpụrụ ndụ abụba nke ukwuu ma na -ebute mgbagha n'etiti sel abụba. Nke ahụ nwere ike bute oriri kalori na mmiri dị na sel abụba ma belata oke mkpụrụ ndụ abụba. Kedu ihe ọzọ, ịma jijiji na -efegharị ụda nwere ike ibute mmetụta dị egwu nke mkpụrụ ndụ abụba iji mee ka ha gbawaa n'otu ntabi anya, belata ọnụ ọgụgụ abụba abụba wee si otú a nweta nsonaazụ iwepụ abụba.
Site na njikọta nke RF na usoro nrụgide nrụgide na-adịghị mma, iji mepụta ike ọkụ bio dị ike site na ugboro ugboro dị ugbu a site n'ụdị reticular loop. Ya mere, ọ nwere ike ịbawanye okpomoku n'ime ma gbarie anụ ahụ dị oke abụba dị n'ime ahụ, nke nwere ike ime ka collagen mụgharịa ma tụgharịa, iji nweta mmetụta nke ikpa anụ ahụ.
Beijing Nubway S na T Co. Ltd guzobere kemgbe 2002 ma dị na Shunyi District, Beijing. China Anyị na -arụkọ ọrụ ọnụ ahịa R&D na ngalaba ọzụzụ maka ụlọ ọrụ na -emepụta ihe kacha arụ ọrụ nke ọma. N'ime afọ ndị gafeworonụ, Nubway achịkọtala otu ndị ọrụ nka nwere ọzụzụ a zụrụ nke ọma bụ ndị ọkachamara na ngalaba dị iche iche .dịka teknụzụ optoelectronic, ụlọ ọgwụ na-ahụ maka ịgwọ ọrịa, imepụta ihe eji emepụta ngwaahịa, onye na-ahụ maka ịma mma ahụike yana ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara ọdịdị. Ugbu a anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ 200 zụrụ nke ọma, ndị raara onwe ha nye.
Nke gara aga: Nubway Kere ọhụrụ 1-10Hz mgbanwe q-switch nd yag laser tattoo removal machine maka ọrịre
Osote: Igwe mkpagharị mkpanaka 3 Diode Laser na -ebugharị ebugharị
Akụrụngwa Slimming Ahụ
Igwe Slimming Cool
Igwe na -agbada Cryo
Ngwa Akụrụngwa Abụba
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Beijing Nubway S&T Co., Ltd.